သတင်း - ၂၀၂၀ တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ polylactic acid (PLA) လုပ်ငန်းစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချနိုင်မှုအလားအလာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးချဲ့ခြင်း
၂၀၂၀ တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ polylactic acid (PLA) စက်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချနိုင်မှုအလားအလာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးချဲ့ခြင်း
Polylactic acid (PLA) သည်အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိသောဇီဝအခြေခံပစ္စည်းအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည်။ ရောင်းလိုအားအရ ၂၀၂၀ တွင် polylactic acid ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်တန်ချိန် ၄၀၀၀၀၀ နီးပါးဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ငါ့နိုင်ငံတွင် polylactic acid ထုတ်လုပ်မှုသည်၎င်း၏နို့စို့အရွယ်သာရှိသေးသည်။ ဝယ်လိုအားအရ ၂၀၁၉ တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ polylactic acid စျေးကွက်သည်ဒေါ်လာ ၆၆၀.၈ သန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၆ ကာလအတွင်းကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သည်နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ကြီးထွားနှုန်း ၇.၅% ကိုထိန်းထားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
၁။ polylactic acid ၏အသုံးချနိုင်မှုအလားအလာသည်ကျယ်ပြန့်သည်
Polylactic acid (PLA) သည်ကောင်းမွန်သော biodegradability, biocompatibility, thermal stability, solvent resistance နှင့် easy processing တို့ပါ ၀ င်သော bio-based ပစ္စည်းအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လက်ဖက်အိတ်ထုပ်ပိုးမှုတို့တွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဒြပ်ပစ္စည်းများနယ်ပယ်တွင်ဓာတုဗေဒဇီဝဗေဒ၏အစောဆုံးအသုံးချမှုတစ်ခုဖြစ်သည်
၂. ၂၀၂၀ တွင် polylactic acid ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်တန်ချိန် ၄၀၀၀၀၀ နီးပါးရှိလိမ့်မည်
လက်ရှိတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုကောင်းမွန်စေသောဇီဝအခြေပြု biodegradable ပစ္စည်းအဖြစ် polylactic acid သည်ကောင်းမွန်သောအသုံးချနိုင်မှုအလားအလာရှိသည်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်ဆက်လက်တိုးတက်လာသည်။ European Bioplastics Association မှစာရင်းများအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် polylactic acid ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုပမာဏမှာတန်ချိန် ၂၇၁,၃၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်တန်ချိန် ၃၉၄,၈၀၀ အထိတိုးတက်လာလိမ့်မည်။
၃။ United States“ Nature Works” သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှုထောင့်မှကြည့်ပါ၊ United States of Nature Works သည်လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး polylactic acid ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ တွင်၎င်းသည်နှစ်စဉ် polylactic acid တန်ချိန် ၁၆၀၀၀၀ ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုပမာဏ၏ ၄၁% ခန့်နှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံ Total Corbion တို့နောက်တွင်ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်တန်ချိန် ၇၅၀၀၀ ရှိပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ၁၉%ခန့်ရှိသည်။
ငါ့တိုင်းပြည်မှာ polylactic acid ထုတ်လုပ်မှုဟာနို့စို့အရွယ်သာရှိသေးသည်။ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းတွေအများကြီးမရှိပါဘူး၊ အများစုကသေးငယ်ပါတယ်။ အဓိကထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများတွင် Jilin COFCO, Hisun Bio စသဖြင့်၊ Jindan Technology နှင့် Anhui Fengyuan Group၊ Guangdong Kingfa Technology ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်ဆောက်လုပ်ဆဲသို့မဟုတ်စီစဉ်နေဆဲဖြစ်သည်။
၄. ၂၀၂၁-၂၀၂၆: စျေးကွက်၏နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှပေါင်းစုနှုန်းသည် ၇.၅% သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။
ပျက်စီးနိုင်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသောပစ္စည်းအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုအဖြစ် polylactic acid သည်အစိမ်းရောင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချရပြီးအဆိပ်မရှိ၊ ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချနိုင်မှုအလားအလာရှိသည်။ ReportLinker မှစာရင်းများအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ polylactic acid စျေးကွက်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၆၀.၈ သန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချနိုင်မှုအလားအလာများအပေါ် မူတည်၍ စျေးကွက်သည် ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၆ အထိ ၂၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းကာလအတွင်းနှစ်စဉ်ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်း ၇.၅ ကိုထိန်းသိမ်းလိမ့်မည်။
Zhejiang Tiantai Jierong New Material Co. , Ltd သည်သုံးစွဲသူများအားအဆိပ်အတောက်ကင်းသောအနံ့အသက်နှင့်ပျက်စီးနိုင်သောလက်ဖက်ခြောက်အိတ်အသစ်တစ်ခုအားလက်ဖက်စိမ်းအိတ်အသစ်သို့ပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။
Post တင်ချိန်: Jul-15-2021